Samsung sidoo kale waxay ka saari kartaa 3.5mm isku xiraha Galaxy S8 | Wararka IPhone
Samsung sidoo kale waxay ka saari kartaa dekedda 3.5mm ee Galaxy S8
Dhaqdhaqaaqa si loo baabi'iyo ah 3.5mm dekedda dhegaha IPhone 7 waa mid sii socon doona muranka ilaa waqtiga uu cadeeyo dadka Cupertino inay saxanyihiin, sida horeyba ugu dhacday waxyaabaha kale ee meesha laga saaray sida 3.5 ″ floppy disk-ka kumbuyuutarkooda. Sida muuqata, soosaarayaasha kale, sida Samsung oo dhaleeceeyay talaabadan xitaa ka hor intaanay rasmi ahayn, way raaci doonaan isla markaana Galaxy S8 Sidoo kale waad waayi kartaa dekedda caanka ku noqotay maalmahan.
Tallaabadu waxay la mid noqon doontaa ta Apple, taas oo ah, Samsung waxay baabiin lahayd dekedda dhegaha ee 3.5mm iyo dadka isticmaala ee iibsaday Galaxy S8 halbeeg ayey isticmaali kari waayeen maxaa yeelay dekedda ay ku jiri lahayd terminal-ka la sheegay waxaa iska leh shirkadda Kuuriyada Koonfureed. Sidan oo kale, Samsung waxay noqon laheyd milkiilaha tiknoolajiyad cusub shirkad kasta oo dooneysa inay soo saarto dhagaha dhagaha la jaan qaada waxay ku bixin doontaa liisanka.
Oo haddii Galaxy S8 leeyahay deked u gaar ah, waa maxay?
Isticmaal ahaan, ma jecli fikradda ah in soosaara kastaa ku daro dekeddeeda. Tani waxay dib noogu celineysaa dhowr sano oo ah waqti uu mobiil walba uu leeyahay sameecado u gaar ah oo aan mid kale isticmaali karin. Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa inay fiicnaan laheyd isticmaalka USB-CLaakiin kiisaskii ugu dambeeyay ee qaraxyada Galaxy Note 7 waxay astaan ​​u noqon karaan inay wax ka khaldan yihiin teknolojiyaddaas. Sikastaba xaalku ha ahaadee, oo hadii ay arintu sidan tahay, waxa ugufiican in la cusbooneysiiyo isku xiraha si loo hubiyo shaqadiisa saxda ah iyo in laga dhigo halbeeg aan ku isticmaali karno kumbuyuutar kasta si aan u dhageysano muusikada, iyo waxyaabo kale oo badan.
Waxa u muuqda inay cad yihiin maalmaha jack tech waa la tiriyay. Xaqiiqdii, muddo aad u dheer ayay ahayd markii qalabka sida kuraasta gitaarka, iwm, lagu xiri karo USB, wax aanan fahmin sanado kahor laakiin aan aad u cadeeyay hada. Weli waa la arki doonaa haddii mustaqbalka aan dhammaanteen adeegsanno halbeeg, Apple iyo Samsung ay ku jiraan, ama soo saare kasta ayaa u maraya wadadiisa, taas oo uga sii xumaan doonta dadka isticmaala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Samsung sidoo kale waxay ka saari kartaa dekedda 3.5mm ee Galaxy S8
Yaa, aniga ma aanan fileynin [/ fekerka]. Waxaan halkan u fadhiyaa oo aan sugaa kuwa ka faallooda maalinta ka dambaysa soo bandhigida iPhone 7 😉
Wuxuu u qoraa sida haddii tufaax ay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee sameeya, mana aha sidaas oo kale, noocyada ugu sarreeya ee android ee sannadkan ayaa horay u sameeyay moto z
Mid ka mid ah waxyaabaha taleefankaasi marka hore soo baxo, iyo mid kale oo Apple marka ugu horreysa patent ka soo saarto oo ay ku shaaciso wararka xanta ah, xusuusnow haddii aan idhaahdo waan cusbooneysiin doonaa mobilada waxaanan ka dhigi doonaa mid gebi ahaanba ku dhisan uun xayeysiinta iyada oo aan weli mid kale la samayn Marabtaa hahahahaha tufaaxa waa fikradaha kuwa kale waa dulin hahaha
laakiin waxaad noqon doontaa fuud jaahil ah
Ku jawaab Carlos Marquez
Peter Stern wuxuu ku biirayaa Kooxda Apple Cloud Services
Dib u cusbooneysii cusbooneysii Scanner Pro, Spark iyo Khabiir PDF ah oo ka faa'iideysanaya astaamaha cusub ee iOS 10